သူ “လာ” ခါနီးပြီလား? | သိလိုရာမေး
နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းလေ့လာမယ် သူ “လာ” ခါနီးပြီလား?
အမျိုးသမီးရယ်လို့ ဖြစ်လာပြီဆိုရင် လစဉ် ဓမ္မတာလာ သွေးဆင်းတယ်ဆိုတာ ပုံမှန်ပါပဲ။ ဒီလိုပုံမှန်ဖြစ်စဉ်ကိုပဲ ဓမ္မတာမလာခင် ၄ ရက် ၅ ရက် ဒါမှမဟုတ် တစ်ပတ်အလိုမှာ ခံစားရတဲ့ ဝေဒနာတွေကြောင့် တချို့အမျိုးသမီးတွေအတွက် စိတ်ညစ်စရာဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။
ဒီလက္ခဏာတွေကို ဆေးပညာအရ Premenstrual Syndrome (PMS) လို့ခေါ်ပြီး အမျိုးသမီးတွေမှာ အဖြစ်များတဲ့ PMS လက္ခဏာတွေကတော့
(၃) ခေါင်းမူး၊ ခေါင်းကိုက်ဖြစ်ခြင်း
(၄) စိတ်ခံစားချက် အတက်အကျမမှန်ခြင်း
(၅) ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သားနှင့် ဆီးစပ်များနာကျင်ခြင်း
(၆) အစားအသောက်ပျက်ခြင်း (သို့) အစားအလွန်အမင်းစားခြင်း
(၇) ပင်ပန်းလွယ်ခြင်း နဲ့
(၈) လိင်စိတ်လျော့နည်းခြင်း တို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီလို ရာသီမလာခင် ဖြစ်တဲ့ ဝေဒနာတွေကို သက်သာစေမယ့် နည်းလမ်းတွေကတော့
နည်းလမ်း (၁) ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ
အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ အေရိုးဗစ်နဲ့ ယောဂလို ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို ပုံမှန်လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် စိတ်ဓာတ်ကျလွယ်တာ၊ ပင်ပန်းလွယ်တဲ့ ဝေဒနာတွေကို အနည်းနဲ့အများ သက်သာစေနိုင်ပါတယ်…
နည်းလမ်း (၂) အစားအသောက်ကို ချင့်ချိန်စားသောက်ပါ…
ရာသီမလာခင် နှစ်ပတ်အလိုမှာ ကဖင်း၊ သကြား နဲ့ ဆား တွေ အများအပြားပါဝင်တဲ့ အစားအသောက်တွေကို လျှော့စားပါ။ ဒီအစားအစာတွေက အမျိုးသမီးတွေကို ရာသီမလာခင်မှာ ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သားတောင့်တင်းတာမျိုးတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
နည်းလမ်း (၃) အိပ်ရေးဝဝအိပ်ပါ…
အမျိုးသမီးတွေအတွက် အိပ်ရေးမဝတဲ့အခါ ရာသီမလာခင် စိတ်အတက်အကျဖြစ်တာ၊ ခေါင်းမူးခေါင်းကိုက်တာတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ညဘက်မှာ ဖုန်း၊ ကွန်ပြူတာသုံးတာတွေကို လျှော့ပြီး တစ်နေ့မှာ အနည်းဆုံး ၇ နာရီ အိပ်စက်ဖို့လိုပါတယ်။
နည်းလမ်း (၄) ဆေးလိပ်၊ အရက်သုံးစွဲမှု လျှော့ချပါ…
ဆေးလိပ်နဲ့ အရက်သေစာသောက်စားတတ်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေဆိုရင် ရာသီမလာခင် ၁ ပတ်အလိုမှာ သုံးစွဲမှု လျှော့ချနိုင်မှသာ ဝေဒနာတွေ ခံစားရသက်သာမှာပါ။ လုံးဝရှောင်ကြဉ်နိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ။
PMS လက္ခဏာတွေကို ခံစားနေရတဲ့အခါမှာ သက်သာစေဖို့ တခြားနည်းလမ်းတွေကတော့ ဝမ်းဗိုက်နာကျင်တတ်သူတွေအတွက် ရေနွေးအိတ်ကပ်တာမျိုးတွေ၊ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတဲ့ ပဋိဇီဝဆေးသုံးစွဲတာမျိုးတွေကို ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။